China faiba glaasi onwe-nrapado teepu ụlọ ọrụ na suppliers | Yuniu
Faiba glaasi onwe-nrapado teepu ka nke faiba glaasi ntupu dị ka ndị bụ isi ihe na-agwakọta ya site onwe-nrapado emulsion. Ngwaahịa a na-ejide onwe ya, dị elu na nkwenye, ma sie ike na nkwụsi ike oghere. Ọ bụ ezigbo ihe maka ụlọ ọrụ na-ewu ihe iji gbochie mgbawa na mgbidi na ụlọ.
4.Good alkali eguzogide
5. Mgbochi imebi emebi
1.Glass fiber teepu bụ Fire, mmiri na ebù, enweghị cracks, egosipụta.
2.Gypsum board na-ewusi nkwonkwo nkedo ma na-arụzi mgbawa, oghere na drywall.
3.Connecting gypsum board, urughuru board, hardboard na ndị ọzọ na mpempe akwụkwọ ihe.
4. Mgbakwunye njikọ nke windo na windo na mgbidi.
5.Hingji gbawara agbawa, nkuku na nkwonkwo na nkedo, ebe akwa.
6.N'ihi na-aga n'ihu mkwado nke mgbidi na uko ụlọ.
Dị ka faiba glaasi onwe-nrapado teepu size, plastic ịse, mgbe packaged na katọn.
Mbupu: site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku
Nzipu Ihe: 15-20 ụbọchị mgbe anata tupu ugwo
Hebei Yuniu faiba glaasi Manufacturing Co., Ltd, guzosie ike na 2012, bụ ọkachamara faiba glaasi emeputa n'ebe ugwu China, nke dị na Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province.China. Dị ka ọkachamara faiba glaasi enterprise, tumadi manufactures na-ekesa a dịgasị iche iche nke E ụdị faiba glaasi ngwaahịa, dị ka faiba glaasi ejegharị, faiba glaasi chopped strands, faiba glaasi ịkpụ eriri ute, faiba glaasi kpara roving, needled ute, faiba glaasi ákwà na na. Ndị a na-ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ụgbọelu na ụlọ ụgbọ mmiri, kemistri na ụlọ ọrụ kemịkalụ, eletriki na eletrọniki, egwuregwu na oge ezumike, mpaghara na-ahụ maka nchekwa gburugburu ebe obibi dị ka ike ikuku, ngwakọta nke ọtụtụ ọkpọkọ na ihe mkpuchi mkpuchi ọkụ. ngwaahịa dakọtara na resins dị iche iche, dị ka EP / UP / VE / PA na na.
Anyị ụlọ ọrụ nwere anyị pụrụ iche ọkachamara mgbe-ire ọrụ ngalaba, ngwaahịa nwere a elu ugwu na anụ ụlọ na-ewu ewu na mba ahịa kwa. Ebumnuche anyị bụ ijere ihe eji azụ ahịa zuru ụwa ọnụ, iji mee ka ndụ ndị mmadụ nwee nchekwa, gburugburu ebe obibi. Ebe ọ bụ na e guzobere na 2012, na ndị ahịa zuru oke na ụlọ na mba ọzọ.A na-ere ngwaahịa anyị na mba iri asatọ na isii ugbu a.Anyị nwere òkè ahịa na Europe, North na South America, Australia, Africa, Middle East na South-East Eshia. Nye anyị ohere, anyị ga-eweghachi gị na afọ ojuju. Anyị ji ezi obi na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ aka.
1.Gịnị bụ ndị ọrụ R & D gị? Kedu iru eru ị nwere?
3 òtù nke mba nnyocha na Development Association nke iko eriri mejupụtara ihe, n'elu R & D technology
2.What bụ echiche mmepe ngwaahịa gị?
Mee ka ndụ ndị mmadụ dịkwuo nchebe ma nwekwuo mmekọrịta gburugburu ebe obibi
3.Can ị na-eweta akara nke ndị ahịa gị?
4.Can ị chọpụta ngwaahịa nke gị?
5.Gịnị bụ atụmatụ mmalite ngwaahịa gị?
A na - eweputa ngwa ahia ohuru na nkeji obula
Nke gara aga: Mass Production 110g 18x14mesh ntupu windo maka ọnụ ụzọ
Osote: Faiba glaasi Direct Roving